पर्यटन, उत्पादन र कृषि कर्जालाई प्राथमिकता दिएका छौं | गृहपृष्ठ
Home बजार पर्यटन, उत्पादन र कृषि कर्जालाई प्राथमिकता दिएका छौं
बजार, बजार संवाद 116 views
पर्यटन, उत्पादन र कृषि कर्जालाई प्राथमिकता दिएका छौं
पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेको राष्ट्रियस्तरको ओम डेभलपमेण्ट बैङ्कले ग्राहकलाई निःशुल्क सी–आस्बा तथा विनाधितो १५ लाख रुपैयाँसम्म प्रोफेशनल कर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साविक सिटी डेभलपमेण्ट बैङ्क र ओम फाइनान्स मर्ज भई राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्कबाट कारोबार गरेको बैङ्कले साविक मनास्लु विकास बैङ्कलाई समेत गाभेको थियो । मर्जरको अनुभव, बैङ्कको वित्तीय अवस्था, लगानीका क्षेत्रलगायत विषयमाबैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारीसँग आर्थिक अभियानका सुरेन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानी :
हालको बैङ्किङ क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
चालू आवको चैतसम्म आइपुग्दा बैङ्किङ क्षेत्रमा केही उतारचढाव आए । केही समय क्रेडिट क्रञ्च भई निक्षेप आकर्षित गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्र्रतिस्पर्धाको अवस्था देखियो । तर, अहिले यो अवस्थामा सुधार आएको छ । आशा गरौं, भविष्यमा सरकार तथा स्थानीय निकायमार्फत सरकारी खर्च वृद्धि भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि राम्रो दिन आउनेछ । राजनीतिक मुद्दा टुङ्गो लागेको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि बैङ्किङ क्षेत्रको योगदान अझै बढ्ने देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)बराबर नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको निक्षेप हुनुले पनि भोलिका दिनमा बैङ्किङ क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ ।
ओम डेभलपमेण्ट बैङ्कको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
बैङ्कले फागुन मसान्तसम्म १८ अर्ब १५ करोड रुपैया“ निक्षेप सङ्कलन गरी १६ अर्ब ३२ करोड रुपैया“ कर्जा लगानी गरेको छ । ग्राहकलाई निःशुल्क सी–आस्बा सेवा प्रदान गरिरहेको बैङ्कले विनाधितो १५ लाखसम्म प्रोफेशनल कर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैङ्कले हाल ५२ शाखा, एउटा एक्सटेन्शन काउण्टर र १६ एटीएम काउण्टरबाट बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैङ्कले हालै कास्कीको घान्द्रुकमा शाखारहित बैङ्किङ सेवा शुरू गरेको छ ।
शाखारहित बैङ्किङ सेवाबाट ग्राहकले कस्ता सेवा लिन सक्छन् ?
शाखारहित बैङ्किङ सेवामार्फत ग्राहकले बैङ्कको बायोम्याट्रिक्स ट्याब्लेट मेशिनबाट प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्न र १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी लिन सक्नेछन् । मर्चेण्ट पेमेण्ट सुविधाअन्तर्गत डिस होमको रिचार्ज गर्न, मोबाइलको बिल भुक्तानी तथा रिचार्ज गर्न सक्नेछन् । अब छिट्टै बिजुली बत्ती तथा अन्य बिल भुक्तानी गर्ने सुविधा पनि शुरू गर्ने योजना छ । यसका अतिरिक्त ग्राहकले लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गतका विभिन्न कर्जा तथा बैङ्कका सम्पूर्ण कर्जाको माग फाइल पेश गर्ने तथा बैङ्कका सम्पूर्ण सेवासुविधाको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
बैङ्कका भावी योजना के–के छन् ?
अहिले हामी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिमको राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्कले पु¥याउनुपर्ने न्यूनतम चुक्तापुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पुर्‍याइसकेका छौं । शाखा सञ्जाल विस्तार गरी ग्राहकलाई सर्वसुलभ तरीकाले सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस आर्थिक वर्षमा हामीले १२ ओटा नयाँ शाखा तथा एउटा शाखारहित बैङ्किङ सेवा खोल्यौं र भविष्यमा पनि शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ । अहिले राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्कमध्ये उत्कृष्ट विकास बैङ्कमा उभ्याउन सफल ओमलाई भविष्यमा अझ उत्कृष्ट बनाउन हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ । विशेषगरी यस आर्थिक वर्षमा हामीले प्रवाह गर्ने कर्जालाई उत्पादनस“ग जोड्ने योजना बनाएका छौं ।
मर्जर सम्बन्धमा बैङ्कको नीति कस्तो छ ?
साविक सिटी डेभलपमेण्ट बैङ्क र ओम फाइनान्स मर्ज भई २०७२ चैत २२ गतेदेखि राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्कका रूपमा कारोबार शुरू गरेको हो । राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्क भइसकेपछि पनि बैङ्कले साविक मनास्लु विकास बैङ्कसँग मर्ज गरी २०७४ असार २ गते संयुक्त कारोबार गरी सफलतापूर्वक दुईओटा मर्जर सम्पन्न गरिसकेको छ । मर्जरमा हाम्रो सुखद अनुभव छ र यसलाई बैङ्कको १०औं वार्षिक साधारणसभाले समेत खुला राखेको छ । भविष्यमा अन्य कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्न, गाभिन तथा एक्वायर गर्न साधारणसभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
अधिकांश राष्ट्रियस्तरका विकास बैङ्कका प्रधान कार्यालय राजधानीमा छन् । तर, तपाईंहरू पोखरामै हुनुहुन्छ, किन ?
हो, अधिकांश राष्ट्रियस्तरका विकास बैङ्कका प्रधान कार्यालय राजधानीमा छन् । प्रधान कार्यालय पोखरामा भए पनि काठमाडौंमा १० शाखामार्फत हाम्रो उपस्थिति छ । काठमाडौं देशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र भएकाले प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा सार्ने प्रस्ताव १०औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको छ ।
जर्मनीको केएफडब्ल्यू डेभलपमेण्ट बैङ्कसँगको सम्झौता कस्तो सम्झौता हो ?
केएफडब्ल्यू जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो सरकारी बैङ्क हो । यससँग भएको सम्झौताअनुसार ओमले ‘सष्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेण्ट इन रुरल एरियाज नेपाल’ कर्जा लगानी शुरू गरिसकेको छ । सम्झौताअन्तर्गत केएफडब्ल्यूले ओमलाई सम्झौतामा तोकिएको क्षेत्रअन्तर्गत साना तथा मझौला उद्यममा २ लाख रुपैयाँ देखि ४० लाख रुपैया“सम्म कर्जा लगानी गर्न १० वर्षका लागि ३ मिलियन यूरो उपलब्ध गराउनेछ । यसमध्ये पहिलो चरणको रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । सम्झौताअनुसार केएफडब्ल्यूले ओमलाई यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक कर्मचारी तालीम, वृत्ति विकास, शाखा कार्यालय तथा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि १ मिलियन यूरो सहयोगसमेत गर्नेछ । सम्झौताअनुसार कर्जा लगानी गर्न केएफडब्ल्यू बैङ्कका प्रतिनिधिले बैङ्कका विभिन्न शाखाबाट लगानी गरिएका परियोजना भ्रमण गरी बैङ्कलाई कर्जा लगानीका लागि रकम उपलब्ध गराएको हो । अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा केएफडब्ल्यूले यो परियोजनाका लागि ओमलाई स्वीकृत गरेको थियो । यसले विगत ३ वर्षदेखि विभिन्न चरणअन्तर्गत बैङ्कको स्थलगत निरीक्षण तथा वित्तीय विवरणको अध्ययनपछि नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामध्ये पहिलो चरणमा सहकार्यका लागि छनोट गरेको हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । ओमको सन्दर्भमा कस्तो छ ?
कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा राज्य र उक्त देशको केन्द्रीय बैङ्कले प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्रलाई राख्नुपर्छ । अहिले विभिन्न पत्रपत्रिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे भन्ने समाचार आइरहेका छन् । तर, ओमले पर्यटनमा लगानी बढाउन पर्यटकीय क्षेत्रमा शाखा खोली लगानी गरिरहेको छ । कृषि, विपन्न वर्ग तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्नै लघुवित्त विभागबाट तथा केएफडब्ल्यूको सम्झौताअनुसार कर्जा लगानी गरिरहेका छौं । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हाइड्रोलगायत अन्य वैकल्पिक ऊर्जामा समेत लगानी गरिरहेका छौं, भविष्यमा पनि लगानी बढाउँदै जानेछौं । हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनभन्दा बढी रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । विकास बैङ्क सामाजप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले हाम्रो ध्यान उत्पादनमूलक कर्जा लगानीमा केन्द्रित छ ।